fanoharana mizaka ny zom - pirenen i Espaina, Però teraka ny 28 Martsa 1936. Loka Nobel ao 2010. Ny zanany dia Álvaro Vargas Llosa. Biôgrafia Ao amin i Freebase:
Loka Nobel ao 1996. I Wincenty Szymborski no rainy. Ny vadiny dia Adam Włodek. Haisoratra en Wislawa Szymborska: Including biography and Nobel speech
Etazonia teraka ny 10 Jiona 1915 tao Montréal ary maty ny 5 Aprily 2005. Loka Nobel ao 1975. Ny vadiny dia Alexandra Bellow. Biôgrafia Ao amin i Freebase:
zom - pirenen i Etazonia teraka ny 26 Jiona 1892 ary maty ny 6 Martsa 1973. Loka Nobel ao 1938. Ny vadiny dia John Lossing Buck. Biôgrafia Ao amin i Freebase:
Alemaina teraka ny 30 Novambra 1817 ary maty ny 1 Novambra 1903 tao Berlin. Loka Nobel ao 1902. Ny zanany dia Karl Mommsen. Ny rahalahiny sy na ny rahavaviny
talen - koronantsary mizaka ny zom - pirenen i Italia teraka ny 24 Martsa 1926. Loka Nobel ao 1997. Ny vadiny dia Franca Rame. Ny zanany dia Jacopo Fo. Biôgrafia
politika, mpanoratra teraka ny 18 Mey 1872 ary maty ny 2 Febroary 1970. Loka Nobel ao 1950. Ny vadiny dia Patricia Russell, Countess Russell, Dora Russell
mpanoratra fanoharana mizaka ny zom - pirenen i Torkia teraka ny 7 Jiona 1952. Loka Nobel ao 2006. Ny rahalahiny sy na ny rahavaviny dia Şevket Pamuk. Biôgrafia
tantaran ny fiainany mizaka ny zom - pirenen i Etazonia teraka ny 24 Mey 1941. Loka Nobel ao 2016. Ny vadiny dia Sara Dylan, Carolyn Dennis. Ny zanany dia Jakob
Irlanda teraka ny 13 Aprily 1906 ary maty ny 22 Desambra 1989 tao Paris. Loka Nobel ao 1969. Ny vadiny dia Suzanne Dechevaux - Dumesnil. Biôgrafia Ao amin i
27 Febroary 1902 tao Salinas, Kalifornia ary maty ny 20 Desambra 1968. Loka Nobel ao 1962. Ny vadiny dia Elaine Anderson Steinbeck. Ny zanany dia John Steinbeck